Wasiirka Adeega Shacabka Iyo Kobcinta Maamulka DDSI Oo Tababar Kuqotoma Maaraynta, qorshaynta Iyo Tirokoobka Cududa Shaqaalaha U Soo Xidhay Qaar Kamid Ah Shaqaalaha Xafiisyada Heer Deegaan. - Cakaara News
Wasiirka Adeega Shacabka Iyo Kobcinta Maamulka DDSI Oo Tababar Kuqotoma Maaraynta, qorshaynta Iyo Tirokoobka Cududa Shaqaalaha U Soo Xidhay Qaar Kamid Ah Shaqaalaha Xafiisyada Heer Deegaan.
Jigjiga(CN) Talaado.12.2015, Wasiirka adeega shacabka iyo kobcinta maamulka DDSI marwo Maajida Maxamed Maxamuud ayaa maanta tababar mudo 5 maalmood ah socday u soo xidhay shaqaale ka socday waaxaha shaqaalaynta(HRM) ee xafiisyada heer deegaan.
Tababarkaasi oo mudadii uu socday lagu qorfaynayay sidii loo karaar galin lahaa nidaamka geedi socodyada tiro koobka xogta iyo qorshaynta cududa shaqaalaha ayaa waxaa soo xidhitaankii ka hadashay wasiirka adeega shacabka iyo kobcinta maamulka DDSI marwo maajida maxamed maxamuud.
Waxayna, wasiiradu sharax dheer ka bixisay ka midho dhalinta hayaanka jihooyinka horumarineed ee xukuumada DDSI dajisatay iyo gaadhida istaraatajiyadahaasi taasi oo ay hirgalintiisa leeyihiin cududa shaqaalaha DDSI.
Waxaa, kale oo ay wasiiradu ka warbixisay dadaalada muga leh, ee xafiiska adeega shacab ku ugu jiro sidii loo sii xoojin lahaa horumarinta dhinaca cududa shaqaalaha DDSI, adkaynta nidaamka maamulka suuban,adeegsiinta bulshada jawaab celinta deg dega ah,nidaamka cad cadaanta iyo isla xisaabtanka iyo waliba natiijada waxqabadka.
Marwo maajida mar ay ka waramaysay ujeedada iyo ahmiyada uu lahaa tababarkaasi ayaa waxay tidhi” tababarkani aad qaadateen waxa uu salka ku hayay nidaamka cusub oo ah sidii loo xoojin lahaa loona dar dargalin lahaa nidaamka qiimaynta iyo darajo siinta shaqada sidii loo kale saarilahaa nidaamkii hore iyo nidaamka cusub ee hada( job evaluation and grading)”.
Waxayna wasiiradu ku boorisay carabkana ku adkaysay in ay shaqaalahan qaatay tababarkani sidii loogu tala galay u hirgaliyaan si loo xoojiyo loolana jaan qaado xawaaraha horumarineed ee xawliga ku socda.
Qaarka mid ah shaqaalaha xafiisyada heer deegaan ee tababarkaasi qaadanayay oo u waramaya warbaahinta deegaanka ayaa sheegay in ay mudadii ay tababarkaa qaadanayeen ka heleen aqoon balaadhan oo ku salaysan nidaamka awood siinta habka fulinta shaqada iyo shaqaalaha. Waxayne hoosta ka xariiqeen shaqaalahaasi in ay sidii loogu tala galay uga midho dhalinayaan.
Tababarkaasi oo ay bixinayeen khabiiro ka socday xafiiska adeega shacabka iyo kobcinta maamulka DDSI ugu danbayntii ay wasiirada xafiiska adeega shacabka iyo kobicta maamulka DDSI marwo Maajida maxamed maxamuud ay shahaadooyin ka turjimaya aqoonta ay barteen gudoonsiisay shaqaalaha qaaday tababarkaasi.